China chando kurongedza tambo fekitori uye vagadziri | Huanyi
Reusable Ice kurongedza netambo inogadziriswa
Senzira ine hutano uye yakachengeteka inoshandiswa pakurapa kwemuviri, Hot kupisa gel mapake anowanzo kurudzirwa nachiremba wepanyama, vanachiremba, varairidzi vemitambo. Iyo inotonhora inotonhora inoshandisa mashandisiro ari nyore kwazvo, nepo kana iwe uchida kusunungura maoko ako, tambo inodiwa, fekitori yedu ine timu yekusona uye yakasonera tambo yakanangana pamapakeji echando kana kuita yakasarudzika yakasarudzika mupakeji, nyore kune iyo kushandiswa kwekupedzisira.
Microwavable ice pack ine refu velcro tambo inokutendera iwe kuchengetedza chando kurongedza kunzvimbo inodiwa uye ugare munzvimbo, yakapfava kubata uye uchiramba uri munzvimbo kunyange kutenderera kana kuenderera nemabasa epamba. Chimiro chakakwana chinotendera kufukidzwa kwakakura kune iyo yese yepazasi musana uye mafomu kumuviri chaizvo, mushonga wakakura wekurwadziwa kurwadziwa musana, kukuvara, kurwadziwa mushure mekuvhiyiwa, kuzvimba, kurwadziwa kwemhasuru. Iyo inochengeta yakapfava uye inochinja mushure mechando.
Inotendera iyo paki kushandiswa pane akawanda akasiyana zvikamu zvemuviri.
Yakapetwa kaviri kudzivirira kubuda. neine yakawedzera gobvu nylon yekunze.
1. Makore gumi Chiitiko cheOEM, ODM, Yakasarudzika ruvara, logo, mapakeji. Unogona kukupa mazano ehunyanzvi, kubatsira kugadzira mhinduro yakanakisa yeiyo gel kurongedza zvigadzirwa zvekurwadziwa.
4. Kune avo kumashure echando kurongedza, bhegi echando kurongedza, hemorrhoid gel mapakeji, fekitori yedu vane hukuru hwakasiyana uye chimiro chesarudzo yako, inogona kukwana vanhu vazhinji
Pashure: Migraine yekununura pack
Zvadaro: Neck kuputira chando kurongedza
Ice Pack YeMutsipa Uye Pafudzi Pain
Ice Kurongedza KweNeck Pain
Neck Ice Kuputira
Pfudzi Ice Rongedza
sunga chando kurongedza